Peji 2 - 7 Zvinonyadzisa izvo WWE havangodi kuti iwe uzive nezvazvo - Wwe
7 Zvinonyadzisa izvo WWE havangodi kuti iwe uzive nezvazvo
Iyo Jimmy Snuka Mhondi Mhosva
Jimmy Superfly Snuka nemusikana wake Nancy Argentino
Muna 1983, musikana waJimmy Snuka Nancy Argentino, uyo aingova nemakore makumi maviri nemaviri panguva iyoyo, akawanikwa akafa mukamuri yavo yemotel. Mukuferefeta kwakatevera, mapurisa akamaka Snuka se 'munhu anofarira'. Iyo Superfly yaive dhiri hombe mukambani ipapo, zvakadii naye iye aive nebasa kune imwe yekutanga-soro kubhururuka Holy S * iyo! nguva muWWE.
Neraki reWWE naSnuka, haana kumbobvira atongerwa mhosva iyi, kunyangwe achipa mapurisa tsananguro yekusiyana kwekufa kwaNancy. Mumwe mushumo akataura kuti Snuka akabvuma kuti akamusundidzira uye nekudaro achimukonzera kuti arove musoro wake achidonha pasi. Imwe nhoroondo yakapihwa mapurisa naSnuka yakanga yakapesana kwazvo; Akataura kuti akange atsvedza ndokurova musoro wake mumugwagwa mukuru ivo vachidhonza mota yavo kuti vatorere.
Pakuongororwa kwemuviri, zvakagumiswa kuti kukuvara kwemusoro wake kwaienderana nemusoro wakamira uchirohwa wakadzokororwa nechinhu chisina kumira chinofamba. (oops!)
Nekudaro hapana humbowo hwakajeka hwakafukunurwa hunogona kujekesa kuti kufa kwaNancy Argentino kwaive kuuraya here kana tsaona, uye nyaya yacho yakazonzi haishande. Jimmy Superfly Snuka ndiye ega 'munhu wekufarira' akaiswa mune iyi kesi kusvikira kuferefetwa kwamiswa.
Anenge sekufungidzira kwakaitika muna2014, makore makumi matatu nemasere gare gare, chiitiko ichi chakauya pasi pe scanner zvakare sezvo zviremera zvakapokana kuvhura kesi kusvika kudare guru. Eerily yakafanana nezviitiko muna 1983 hazvo, iyo nzira yatonhora zvakare.
Kunyadziswa kwaPat Patterson
Zvinofungidzirwa kuti kunyangwe vazhinji vemazuva ano vanoona vanoziva nezvePat Patterson nekuti aimbozviratidza muWWE kuronga seyemubatanidzwa stooge dhongi isu isu tese ratakada kuona richirohwa. Pane zvishoma zvekurwa nhoroondo yakanamatira kuPatterson hazvo, kuve wekutanga Intercontinental Champion, pamwe nekunyadziswa kwekuve nemukurumbira usingabvunzwe kana zvasvika pakuitisa. Ndiri kuseka ani?
Pat Patterson, seizvo WWE Universe yaiziva kwemakore zvisati zvaziviswa zviri pamutemo paWWE Legend's Imba, ngochani. Kwete izvozvo chete, anga achinzi akanyengetedza vadiki uye vanouya mashura makuru kuita zvishuwo zvekunyepera kuvapa 'push' mukambani.
Kubvuma kwaRoddy Piper zvakanyanya kuti Patterson akamunyengerera mukuita bonde uye kuti kuyedza kwemaindasitiri hakuna kunyatso kumusiya sarudzo yaive chinhu chakatora ushingi hukuru, sezviri pachena muhurukuro iyi. Piper iye anodzosera zvachose chimiro chake muchikamu chekupedzisira chevhidhiyo mumoto uye nesarufa post-commentary, zvakapfava zvakanyanya zvekukuvara uye zvinoshandira kuratidza mhosva yaPatterson.
Pat Patterson anoitika saStephanie McMahon's godfather, uye panzvimbo yebasa rake rekugadzira muWWE programming, hazvina kuoma kunzwisisa kuti sei makuhwa aya abviswa.
Disiki: Pat Patterson ndemumwewo wepfungwa dzakapfuura kuti ambofarire bhizinesi. Vazhinji varwi vane chikwereti chebudiriro yavo yekunyepedzera kwaari uye neWWE zvakasikwa zvine chikwereti kwaari nekuda kweRoyal Rumble, pakati pezvimwe zvinhu.
Iye zvino pfungwa yekuve nedare risiri-repamutemo rinotungamirirwa nevakwikwidzi vakuru inogona kuita kunge mubatanidzwa wevashandi vane huwori, asi dare reWrestler rakagadzwa semhinduro kune zvinodikanwa kwete sekuyedza kutora simba kana simba. Icho mavambo anogona kuteverwa kumazuva ekutanga mu-pro-wrestling uye kune imwe ngano kunyanya, Dutch Mantell, kana kuzivikanwa zviri nani kune WWE zvakasikwa izvozvi saZeb Colter.
Mantell, mumazuva ake ekutanga, akange aona kuti kupisa chaiko pakati pevarwi kazhinji kwaiwana nzvimbo dzisina hutano uye akatarisa mutsimba, Bruiser Brody, achirasikirwa nehupenyu hwake pachiitiko chakadai chekudzivirirwa kushure kweshure. Brody, akakwezvwa munzvimbo yekugezera nekunyepedzera kwekukurukurirana, akabayiwa nemumwe waaibata naye wrestling anonzi Jose Gonzales uye makore makumi maviri nemanomwe kubva pachiitiko ichi, hapana munhu akatongerwa mhosva uye Gonzales akafamba akasununguka.
Izvi zvakadaro zvakaita kuti Mantell anzwisise uye aone kukosha kwekumisa kushongedzwa uye kurongeka pakati pevarwi uye nekudaro kwakauya ingenius pfungwa yedare rewrestler. Pfungwa iyi yaive yekutaura nezvematambudziko pamberi pemutsimba uyo angave achitora jasi remutongi, nevamwe vachitamba chikamu chemagweta, zvapupu uye / kana vateereri. Zvino kunyange izvi zvikawedzera chinhu chidiki chemakomisheni kumatanho nekuda kwekumanikidzirwa kwazvose, zvakare zvakaisa pachena kuti hukomba nehutongi hwakachengetedzwa mukati memapoka.
Sekuzivisa kunoita Randy Savage, Vince McMahon aiziva nezvekuvapo kwedare asi akaibvumidza kuti igare iri chakavanzika pachena nekuti yakapa mukana wekubvarura ropa rakaipa pakati pevatsigiri mubhudhi. Chero kupi kufungidzira kuti ndiani akashanda semutongi? Iyo Phenom hongu.
Anosimbisa mutemo aive JBL.
Phenom payakange isipo, Triple H yakakwira.
Nei Randy Savage taboo?
Randy Savage haana kuzombodzoswazve naVince McMahon mushure mekusiya WWE muna1984
zvinorevei kusununguka nemweya
Iye zvino uyu ndiye mai vese zvinonyadzisa kusvika paWWE. Inowirirana neyakaipa nguva muWWE nhoroondo apo Vince akabatanidzwa mukubata nesteroid miedzo. Zvinonzwisisika, aive achirasikirwa nevatsigiri vake uye kutsigirwa nemari nekuda kwekushambadzirwa kwakaipa kwakatakurwa nekambani iyi. Dai Terry Bolea (Hulk Hogan) asina kupupura ndokubvisa Vince yekugovera steroid kune vanorwa naye, WWE sekuziva kwedu nhasi ingadai isina kuvapo.
Yakanga iri panguva iyoyo apo Randy Savage akasiya WWE mushure mekuvimbisa Vince McMahon kuti aisazobatana neWCW. Akadzokera pane zvaakataura ndokujoina kukwikwidza kukwikwidza nguva pfupi, achiwana kutsamwa kwaVince uyo akanzwa kutengeswa. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero izvo zvinotsanangurwa kuti vatsanangure chigumbu icho Vince chakabatirwa naRandy Savage.
Imwe tsananguro inogona kusanganisira chikafu chakakurumbira, Slim Jim, uyo akasungwa naRandy Savage akasiya zvakadzama zvairehwa naMcMahon. Savage paakaenda kuWCW, Slim Jim akateverawo, achisiya Vince McMahon mumwe akatsigira mupfupi panguva yaaida rutsigiro rwemari rwaaigona kuwana.
Kana, zvaive nekuti iye akadzidza nezvekupindirana pakati pekukurumidza-kuenda-kubuda Randy Savage uye ane makore 17 okuberekwa Stephanie McMahon?
Ehe nyaya yacho haina kumbobvumidzwa asi Vince McMahon akacherechedzwa kuve neshanduko yakatarwa mukuzvibata kana mumwe munhu akadudza Randy Savage kwaari. Akambonzwikwa achiti mune uncharacteristic sombre toni, handife ndakamboita bhizinesi nemurume iyeye futi. Sezvo tave tichiziva kuna Vince McMahon's modus operandi pamusoro pemakore, zvakangoomera zvishoma kubvuma pane kukosha kwechiso icho Randy Savage mushure megore ra1994, chisina kumbokwana zvakakwana kuti bhizimusi ridaidzwe muWWE. Kana zvirinani kwete kusvika zvave kunonoka.
kuziva sei ex wako anoda iwe shure
ndinonzwa sekunge handichazowana rudo zvakare
mutsauko uripakati pekuda mumwe munhu nekudanana nemumwe munhu
ndinonzwa kupusa nguva dzese
chii chinonzi pfungwa yekodzero
ko nhamba ina inorwadza chaizvo